केल: ग्रेड, वर्णन, रोपण र हेरविचार
केल - उपनगरीय क्षेत्रमा विकास प्रमुख तरकारी बाली मध्ये एक छ। को बोट धेरै उपयोगी र आवश्यक छ, त्यसैले गरेको यो बढ्न कसरी कुरा गरौं।
केल पनि पर्छ तोरी परिवार, जो तोरी, turnips, rutabaga, मुला, मुला हौं। युरोप, एशिया र मध्य एशिया मा, भू-मध्य क्षेत्र यो परिवार को 50 प्रजाति भन्दा फैलाउन छ।
यो कि ज्ञात छ द्वारा पुरातन मिश्री, रोमी र युनानी हुर्किसकेका स्प्राउट्स खाने। यो पनि चार हजार वर्ष पहिले एक प्रति खाना भएको छ। हामीलाई पश्चिमी युरोप बाट केल Kievan रस (XIII शताब्दीमा) को heyday फिर्ता ल्याइयो। यो Exaltation (सेप्टेम्बर 27) को अर्थोडक्स भोजमा पछि जाडो लागि यो बाली गर्न सँगै पनि नयाँ परम्परा सुरु गर्न XVIII सताब्दी संस्कृति मा दृढ जीवन को रूसी तरिका मा प्रवेश छ रोचक छ।
आधुनिक संकर र सबै भन्दा राम्रो ग्रेड
तपाईं यसलाई विचार भने, यो एक सरल बन्दागोभी हाम्रो भोजन को धेरै आधार छ कि स्पष्ट हुन्छ। हामी त यो कति प्रयोग गरिन्छ पनि नोटिस छैन कि यो accustomed छन्।
यसलाई निरन्तर नयाँ, थप होनहार संकर र किसिमहरु प्राप्त गर्न प्रजनन छ विचारणीय छ। तर, आफ्नो सान्दर्भिकता र राम्रो पुरानो प्रजातिहरू, लामो सिद्ध छ माली गुमाउनु छैन।
बन्दागोभी सबै प्रजातिहरू प्रारम्भिक-maturing, मध्य-सिजन र लेट विभाजित छन्। हामी सबै भन्दा राम्रो मिति प्रजातिहरू गर्न, विशेषज्ञहरूका अनुसार चाहन्छन्।
को जुन - अति-छिटो किसिम। Sredneustoychiva रोग। असामयिक सफाई टाउको को खुर गर्न सक्छ।
स्थानान्तरण F1 - 120 दिन मा परिपक्व।
कोपेनहेगन बजार - 115 दिन पछि maturing।
Ditmarskaya प्रारम्भिक - 115-120 दिन पछि प्राविधिक परिपक्वता आउँछ।
सुनको हा-1432। फसल गर्न रोपण देखि 102-110 दिन बित्दै।
प्राप्त राम्रो harvests मध्यम पकने यस्तो प्रजातिहरू बढ्दै मा हुन सक्छ गोभी:
उपहार। 130 दिन - maturing को अवधि।
Menza F1। 115 दिनको लागि परिपक्व।
महिमा-1305। फसल गर्न रोपण देखि 137 दिन ठाँउ लिन्छ।
महिमा Gribovskaya-231। 125 दिनको लागि परिपक्व।
Caporali F1। यो 90 100 दिन देखि परिपक्व।
लेट प्रजातिहरू सबैभन्दा लामो अवधि भण्डारण र workpiece, संरक्षण लागि लोकप्रिय हो:
जिन्जरब्रेड मानिस F1।
यो बन्दागोभी गुणस्तर बीउ निर्भर स्पष्ट छ। तपाईं आफ्नो अधिग्रहण लागि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तथापि, तपाईं कहिले र कुन उद्देश्यका लागि यो आवश्यक छ तपाईं किन्न अघि निर्णय गर्नुपर्छ। ढिलो, प्रारम्भिक वा मध्य: त्यसपछि तपाईँ सूट कस्तो तपाईं सबै भन्दा राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। नियम, मान्छे आफैलाई संस्कृति बढ्न भने, जोर जाडो प्रजातिहरू छ। र प्रारम्भिक र मध्य सानो परिमाणमा लगाए गर्न सकिन्छ। उनीहरूले सक्दैन लामो झूट, प्रारम्भिक संस्कृतिका खाली लागि उपयुक्त छैनन् भनेर बुझ्न छन्। मध्य-ग्रेड ताजा खपत र salting दुवै लागि उपयुक्त। उसोभए, तपाईं जाडो प्रजातिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ हिउँदमा भण्डारणको लागि।
प्रारम्भिक बन्दागोभी प्रारम्भिक मार्च मा छरिएको, तर बीसौँ दिन भन्दा कुनै पछि छन्। मध्यम प्रजातिहरू अप्रिल 25 पछि रोप्न सकिन्छ। अप्रिल को पहिलो दिन देखि संस्कृति लेट-लगाए। क्षण देखि बीउ छरिएको र बिस्तर बित्दै अघि, सामान्यतया 45-50 दिन। छन्
केल - यो माटो को संरचना मा धेरै माग छ जो संस्कृति छ। त्यसैले, यो अग्रिम तयार राम्रो छ। यो टर्फ भूमि र धरण को बराबर भागहरु मा मिश्रित गर्नुपर्छ। मिश्रण खरानी एक घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र ट्रेस तत्व स्रोतको रूपमा कार्य गर्नेछ जो (1 Tbsp चम्मच प्रति माटो को 1 किलोग्राम।) थपिएको थियो। यो जवान बिरुवाहरु मा blackleg रूपमा रोग जस्तै को उपस्थिति, प्रतिरोध गर्न मदत गर्नेछ।
तपाईं पनि एक मिश्रण र एक सानो विभिन्न संरचना, उदाहरणका लागि, पीट आधारित तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जो मा जो बिरुवा नष्ट गर्न सक्नुहुन्छ रोगजनकों को केल वा अन्य cruciferous उच्च रूपमा नहुनु, एक प्रजाति बढ्छ बगैंचामा देखि बीउ पृथ्वी रोपण लागि प्रयोग गर्न सकिँदैन।
बीउ रोपेको अघि पानी मा बीस मिनेट गरम गर्नुपर्छ। त्यसपछि सामान्य चिसो पानी मा आफ्नो कम। यो सरल प्रविधी फंगल गर्न बीउ प्रतिरक्षा सुधार गर्छ। प्रक्रिया बन्दागोभी रोपण अघि? यो एक वृद्धि stimulator मा बीउ भिजेको गर्न सबै भन्दा राम्रो छ ( "सिल्क", "APPIN", "Humate")। रोपण अघि, देशमा राम्रो पानी हाले हुनुपर्छ र तपाईं स्प्राउट्स हेर्न सम्म अब क्षण सम्म humidify। बीउ भन्दा कम सेन्टिमिटरले एक गहिराई मा छरिएको छन्। त्यसपछि टप बक्स पन्नी ढाकिएको पनि evaporating देखि चिस्यान रोक्न। बाली बीस डिग्री को एक तापमान मा राख्नुपर्छ।
पहिलो मार 4-5 दिन देखा पर्छ। त्यसपछि फिल्म हटाइएको र दस डिग्री गर्न सामग्री अप को तापमान कम गर्न सकिन्छ। यस्तो अवस्था अन्तर्गत बोट पहिलो साँचो सम्म, हुनुपर्छ बन्दागोभी को पात। त्यसपछि बिरुवा 18 डिग्री को एक तापमान मा राखिन्छ, तिनीहरूले नियमित प्रसारित हुनुपर्छ। यो अवधिमा तपाईं खन्याउन वा overdry माटो गर्न सक्दैन। sprouting पछि प्रक्रिया स्प्राउट्स? बिरुवाहरु ध्यान हुन मैंगनीज वा तामा सल्फेट को कमजोर समाधान खन्याउन गर्नुपर्छ।
बिरुवा गोता रूपमा?
एक हप्ता र तरकारी पात बन्दागोभी गोता को उद्भव पछि आधा, पछि बोट सामान्य विकास लागि थप स्थान आवश्यक छ किनभने। माटो transplanting अघि तरिकाले पानी हाले। यसबाहेक, प्रत्येक बिरुवा माटो को एक गांठ बाहिर लिएको र तेस्रो मूल द्वारा pruned छ। Whereupon मिश्रण संग एक बेकर मा precipitated। तपाईं बीउ त्यसपछि बिरुवा डुबुल्की मार्न गर्न आवश्यक छैन, एक व्यक्ति पट मा सुरुमा छर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत कन्टेनर सजिलो बाट बिरुवाहरु त्यसपछि खुला जमीन मा transplanted, तिनीहरूले कम विक्षिप्त छन्।
खुला जमीन मा बन्दागोभी रोपण अघि उनको स्वभाव को दुई हप्ता भित्र आवश्यक छ। यो गर्न, कोठा हवादार, र त्यसपछि बालकनी मा बिरुवाहरु बनाउन थाल्छन्।
गोभी: रोपण, fertilizing
बिरुवा यसलाई पहिले नै पाँच वा सात पत्रक छ जब एक समयमा खुला जमीन मा लगाए, र उचाइ 12-20 सेन्टिमिटर पुग्यो। यस्तो संकेतक विभिन्न समयमा पहुंच विभिन्न प्रजातिहरू छन्। उदाहरणका लागि, प्रारम्भिक मई मा प्रारम्भिक तयार, जबकि मध्य र लेट - एउटै महिना वा मध्य-जुन मा अन्त गरेर।
खुला जमीन मा लगाए बन्दागोभी अघि, यसको लागि एक राम्रो साइट तयार। यो घाम हुनुपर्छ। प्रारम्भिक प्रजातिहरू बलौटे माटो र loam रुचि र लेट र मध्य उपयुक्त माटो माटो र loam लागि। यो बोट categorically छैन उपयुक्त अम्लीय जमीन हो कि सम्झना गर्नुपर्छ। साथै, एक संस्कृति को खेती छ कि दूषित bacteriosis (आठ वर्ष) भूमि मा छैन उत्पादित गर्न सकिन्छ। पनि मनमोहक बन्दागोभी जहाँ हाल पटक अन्य cruciferous (सलगम, मुला, सलगम, मुला) मा वृद्धि ती क्षेत्रमा लगाए।
माटो गिरावट मा शुरू, अग्रिम तयार छ। एक संगीन कुदाल मा उत्खनन गर्न, र जाडो खर्च गर्न बाँकी धरती। आवश्यक पंक्तिबद्ध, यसको सतह छैन चिस्यान को अवधारणा को प्रक्रिया मा सकारात्मक प्रभाव अनियमितताहरु। प्रारम्भिक वसन्त मा हिउँ पिघलने गर्दा माटो, एक rake संग लगायो छ पहिले सामा हटाइयो।
प्रारम्भिक प्रजातिहरू 50 60 सेन्टिमिटर को एक दूरी मा रोपिन्छ, र लेट र मध्य - तिनीहरूले प्रकाश र ठाउँ धेरै आवश्यक किनभने 60 70. गर्न निकै बाक्लो बोट एक दूरी मा राखिएको हुनुपर्छ।
को वेल्स बिरुवा को जरा भन्दा बढी गर्न आवश्यक छ। प्रत्येक प्वाल पीट, बालुवा, धरण, खरानी पचास ग्राम र साढे चम्मच nitrophosphate को एक मुट्ठी धारण गर्नुपर्छ। यो सबै प्रशस्त मात्रामा पानी हाले छ। अर्को, यो बिरुवाहरु तल्लो पात जमीन संग नै स्तर मा थिए यस्तो तरिकाले रोपिन्छ।
यसलाई मूल हुनेछ रूपमा बन्दागोभी को रोपण पछि, हेर्न पहिलो पटक हुनुपर्छ। तपाईंले अस्थायी रूपमा यसलाई अलिकति pritenit गर्न आवश्यक पर्दछ। हप्ताको समयमा, यो हरेक साँझ भएको बिरुवाहरु जल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। को बिरुवा भविष्य हेरविचार मा त जटिल छैन। उहाँले, weeding गरिनेछ माटो, पानी, रोग र किरा, नियमित fertilizing विरुद्ध उपचार loosening।
तीन हप्ता पछि खुला जमीन बिरुवाहरु मा रोपण पछि तिनीहरूले पहाडी गर्न आवश्यक छ। दस दिनपछि प्रक्रिया बारम्बार थियो।
बन्दागोभी को राम्रो बाली बढ्न गर्न, सिंचाई मोड पालन गर्न निश्चित हुनुपर्छ। त्यो पानी धेरै आवश्यक छ। यो साँझ मा बिरुवाहरु जल गर्न सबै भन्दा राम्रो छ। एक कम तापमान यसलाई हप्तामा एक गर्न पर्याप्त, तर तातो मौसम hydration मा बाहिर हरेक दुई वा तीन दिन लगे गर्नुपर्छ।
आदर्श, प्रत्येक हजारी पछि माटो खुकुलो पार्नु पर्छ। व्यवसायी साधारण माटो र एउटै समय बिरुवाहरु फीड मा चिस्यान राख्ने मद्दत गर्छ जो पीट (अप गर्न पाँच सेन्टिमिटर बाक्लो), संग खर्च mulching सुझाव दिन्छौं।
एक रुचाउने कसरी सञ्चालन गर्ने?
पहिलो लाउने को गोता बिरुवाहरु पछि दस दिन बाहिर छ। यो मिश्रण पानी मा भंग भएको थियो गर्न, पोटाश मल, superphosphate2ग्राम र4ग्राम दुई अमोनियम नाइट्रेट को ग्राम। पदार्थ यस्तो रकम पानी एक लीटर मा भंग। 50-60 बोट खुवाउन पर्याप्त यस तरल।
निम्न मल दुई हप्तामा लागू छन्। यो नै निरूपण प्रयोग गर्दछ। तपाईं जवान बिरुवाहरु को पहेंलो नोटिस भने, तिनीहरूले तरल मल (1:10) को एक समाधान संग पानी हाले गर्न आवश्यक छ। अर्को लाउने जमीन मा बन्दागोभी रोपण अघि गरिन्छ। यसको प्रयोग अमोनियम नाइट्रेट (3 जी), superphosphate (5 ग्राम) र पोटासियम मल (8 ग्राम) को लागि। को घटक पानी लीटर मा भंग छन्। पोटाश मद्दत तल खुला जमीन मा बन्दागोभी बसोबास गर्छन्। समाधान को तयारी संग Tinker गर्न, तपाईं "Kemira सुइट" भनिने मल खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
को बिरुवा चरण मा बिरुवाहरु fertilizing, भविष्यमा थप तीव्र वृद्धि प्रदान गर्नेछ।
बिस्तर बन्दागोभी खरानी छर्कियो पछि संग मिश्रित सुर्ती धूलो। यो फ्लिया beetles र slugs देखि साना बिरुवाहरु रक्षा गर्न मद्दत गर्नेछ। कीटनाशक को बन्दागोभी अझै पनि एक प्रति खाना रूपमा प्रयोग गर्न धेरै राम्रो छैन। त्यहाँ प्रयोग बिना किरा देखि रक्षा गर्न सरल तरिका हो "रसायन।"
टमाटर भन्दा माथि (2 किलो) पानी (5 लिटर) भरिएको र चार घण्टा infused थियो: लार्वा र लाईकीराको को जलसेक निम्न छिडकाव नाश थिए। त्यसपछि, परिणामी तरल यो शांत पर्छ जो पछि तीन घन्टा, लागि उसिनेर थियो। उपयोग गर्नु भन्दा पहिले, यो पानी संग पतला थियो (अनुपात - 1: 2)। राम्रो समाधान बोट मा लिइएको थियो, बस यसलाई कसा भयो टार साबुन थप्न सक्नुहुन्छ, तल चलिरहेको छैन।
लाभ्रेकीरालाई र लाईकीराको विरुद्ध लड्न, प्याज बोक्रा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो एक tincture तयार। यो QUART लागि बोक्रा उम्लिरहेको पानी2लिटर खन्याउन र दुई दिन जिद्दी। समाधान, फिल्टर थियो पानी र तरल साबुन को दुई लिटर थपियो।
व्यवसायी पनि बन्दागोभी रोपण सेज, marigold, धनिया, Rosemary, तुलसी नजिकै राखिएको कीराहरू विरुद्ध संघर्ष को एक उपाय रूपमा सिफारिस गर्छौं। यी बिरुवाहरु fleas, moths, लाईकीराको घृणा उत्पन्न।
"Megafol": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
रास्पबेरी - शाही मेनुबाट बेरी
शटल टमाटर - कुनै पनि चिन्ता बिना टमाटर
अभिनेता विक्टर Rakov: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, चलचित्र
छाला जैकेट - उहाँलाई लागि, उनको लागि र सबै को लागि
स्लाव भाषाहरु राष्ट्रिय पकवान - रातो borscht। लागि नुस्खा
सुलेमानको सील राजा: इतिहास र वास्तविकता
जो ग्यारेज निर्माण लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, OSB को आकार के हो?
रोमन Viktyuk। आधुनिक समयका थिएटर